Home Wararka Dhibaatada Haweenka Xamar waa Dheefta Eng.Yariisow
Dhibaatada Haweenka Xamar waa Dheefta Eng.Yariisow
Guddoomiyaha Gobolka Banadir Cabdiraxman Cumar Cisman ayaa hadda waxaa uu noqday shakhsi dhibaato xoog leh ku haya dadka deggan gobolka Banaadir, waana shakhsiga ugu sharta badan ee la isku habaaro sida ‘Yariisow ku arag”.
Dhaca dhulalka dadweynaha, burburinta goobaha garab rarata ay irsaqooda ka raadsadaan, kala tuuridda meelaha agoonta ay haweenka gobolka Banadir ilmaha ku korsadaan, duminta guryaha ay dhaxanta iyo qabowga ka galaan, katarabiil gelinta hooy masaakiineed awood badan oo lagu dhiso loo lahayn balsa coshado laga sameystay oo ay ilmaha iyo haweenka qoraxda ka galaan oo dhammaantood Muqdisho ku yaalla ayuu cagta mariyaa Gud. Yariisow.
Dhinaca kale goobo ganacsi oo ay leeyihiin ganacsato waaweyn ee uu horay u shaaciyey inuu duminayo waa ka aamusay kadib markii uu ka qaatay laaluush, waayo ganacsiyadaas wali taagan yihiin muddo beeneeddii loo qabtayna waxay dhamaatay Agoosto 2018.
Hasa yeeshee haweenka ooynaya oo ganacsigooda cagta la mariyey waxaa yar laaluushka ay bixin karaan si loogu dhaafo ganacsigooda sidaas darted waa istustus madaxda sare oo aan ka naxayn dal iyo dad toona uu isku tusayo inuu yahay ma naxe la mid ah.
Gudoomiye Yariisow oo aan xishoon kana dhex niikiya haween iyo masaakiin lagu soo ururiyo degmooyinka gobolka baandir ayaa ku ah laf dhuungashay garab raratada yo nolosha Muqdisho oo dhan.
Waxaan xusuustaa in dawladdii kalatalisada ahayd ee Maxamed Siyaad ay haweenka isugu soo bixin jirtay degmooyinka gobolka banaadir si ay u niikiyaan madaxdana u daawadaan, laakiin Yariisow daawasho kaliya kuma sintee waa la niikiyaa, kuna niikiyaa haween uusan qabin.
Runtii ma jirto cid Muqdisho u wakiil ah oo ay soo xusheen una so dirsadeen golayaasha dalka ka jiraa sida degmooyinka dalka oo cid ka naxeysaa Xamar ma jirto. Haddii ay ka soo jeedi lahaayeen wax xildhibaanno ah waxaa laga yaabai lahaa inay dhibaataadaan wax ka qaban lahaayeen walow xildhibaanadiiba ay noqdeen shaqaale u shaqeeya Madaxtooyada oo aan fahamsaneyn inay yihin wakiillo bulshada ka wakiil ah oo ka hada dhibtooda.
Isku soo duub dadka Muqdisho waxaa kaliya ee ay kaga bixi karaa dhibaatada canshuuraha xad dhaafka ah ee cirka lagu geeyey, duminta ganacsigooda, ku tumashada xuquuqahooda madaniga waa iyagoo iska qabta Yariisow, Kheyr iyo Farmajo oo aan meel kale xukumin.
Ogaada ma jirto degmo kale oo ay dowladdaan canshuur ka qaado waa Xamar oo kaliya. Xamar waa inay is xoreysaa si ay uga baxdo dhibaatooyinkaan joogtada ah ee dhinac waliba ka saameeyey. Maxay ka faa’iidayaan dowlad iyaga dhibeysa, iyago heli kara dowlad aan dhibeyn ee iyaga u shaqeysa oo u jirta dhowr maalmood oo ay qaadaan tallaabooyin ay culeyska iskaga qaadayaan, una soo baxaan waddoyinka Muqdisho iyagoon wax rabshada ah sameyneyn oo aan wax qaran dumis ah ku kacayn. Kor iyo hoos waa dhiban nahay waa nala dilaa, waa nala dhacaa, waa nala dhibaa oo jidkasta na laka xeraa maxaa horay oo aan dhowranaa?
Waxaa halkaan hoose ku lifaaqan laba muuqaal ee bal reer Muqdishow nala daawada oo go’aan gaara.
Waxaana looga dayanayaa odayga cidda ee Farmajo oo Faray in fasahaadda la fidiyo